Ifulethi lesimanjemanje enkabeni yedolobha laseMariapfarr
Le ndlu iyindlu yokunethezeka yekamelo elilodwa elisenkabeni ye-Mariapfarr, elinye lamadolobha anelanga kakhulu e-Austria, esendaweni ephakeme ngamamitha ayi-1,100.
Kunezinto eziningi okumelwe zenziwe endaweni eqondile njengokuhamba izintaba, imizila yebhayisikili yezintaba kanye nezindawo zokulala zangempela ezinikezela ngezinto ezikhethekile zesifunda, ingasaphathwa eyokubuka okumangalisayo kwezintaba ze-Tauern ne-Nock. Ebusika, indawo yokushibilika eqhweni elungele umndeni yase-Fanningberg iqhele ngemizuzu eyi-10 kuphela. Abashwibi be-Cross-country nabasubathi be-biathlon nabo banezinketho eziningi lapha. Izindawo zokudlela ezinhle zingafinyelelwa ku-50 m kanye nempahla evamile ku-190 m.
Leli fulethi liqukethe igumbi lokuphumula elithandekayo elinekhishi lesimanje elivulekile kanye negumbi lokulala elilodwa elinendlu yokugezela yesimanje. Leli fulethi eline-WiFi yamahhala linendawo yokupaka etholakalayo emagcekeni.
Njengesivakashi salesi sakhiwo unamahora angu-3 okufinyelela mahhala nsuku zonke ku-Wellness oasis engumakhelwane futhi exhumeke ngaphakathi i-Samsunn (izingane kusukela eminyakeni engu-14) enama-sauna angu-4 ahlukene, ikhabethe elinomusi, ikhabethe le-infrared, ibhavu lokugeza nokunye. Ukwelashwa ngobuhle kungenzeka ngezindleko ezengeziwe.
Ukucaciswa: ehlobo (29.05.2021- 31.10.2021) uzothola i-Lungaucard mahhala ngesikhathi uhlala. Isibonelo, leli khadi likunikeza ukufinyelela kwamahhala kuma-gondola ahlukahlukene (1x i-gondola ngayinye ngesikhathi uhlala), ukufinyelela ezindaweni ezikhangayo ezihlukahlukene, inqaba, isitimela esishisayo, i-toboggan run kanye nomgwaqo okhokhelwayo (kungashintshwa)
Kusukela ebusika i-21/22 € 3 ngosuku endaweni yokupaka yangaphandle kanye no-€ 6 ngosuku endaweni yokupaka izimoto engaphansi komhlaba kufanele ikhokhiswe esizeni. Kukhona ipaki yezimoto zomphakathi yamahhala engaba ngu-200-300 m ukusuka endaweni yokuvakasha.
Isakhiwo: Igumbi lokuhlala(umbhede osofa ababili, i-TV), ikhishi elivulekile(umpheki, i-oven, i-microwave, umshini wokugeza izitsha, isiqandisi), igumbi lokulala(umbhede okabili), igumbi lokugezela(ubhavu noma ishawa, indishi yokuwasha, indlu yangasese), indawo yokuphumula(kwabelwane no ezinye izihambeli)(sauna(kwabiwe nezinye izihambeli))